Node.js / npm / Composer aan xidid lahayn > Vielhuber David
Node.js / npm / Composer aan xidid lahayn08
Qoraal boog duug ah ayaan ku sharaxay sida loogu marti geliyo Node.js bilaash adoo adeegsanaya Heroku . Hadda waxaan ku tusi doonaa hab sida aad ugu rakibi karto Node.js , npm iyo Composer meel kasta oo marti-gelin kale ah oo aan lahayn xuquuq aasaasi ah oo leh dhowr koodh lambar ah. Iyada oo aad ku rakiban karto baakado, geyn karto codsiyada Vue.js ama aad bilaabi karto server Express.js ah. Waxaan had iyo jeer ka shaqeynaa galka isticmaalaha waxaanna isticmaalnaa nvm - Node Package Manager.
Waxaa muhiim ah in la sii hubiyo ka hor in curiyaha iyo noodhka aan la heli karin iyo in khadadka soo socda aysan soo saarin wax soo saar:
Marka hore waxaan dejineynaa doorsoomayaal deegaan ku meel gaar ah oo aan hadhow u baahanahay. Si tan loo sameeyo, waxaan go'aamineynaa galka isticmaalaha isticmaalaha (badanaa ~ /, qaar ka mid ah martigaliyayaasha la wadaago sidoo kale / www / htdocs / xxxxxxx /) iyo nooca PHP ee la doonayo (tusaale ahaan bixiyaha All-Incl / usr / bin / php72, oo leh DomainFactory / usr / local / bin / php7-72LATEST-CLI):
Hadda waxaan hubinaynaa in nooca ugu dambeeya ee PHP uu ku shaqeynayo qalabka. Si tan loo sameeyo, waxaan ku abuureynaa galka cusub galka guriga, waxaan abuureynaa xiriir jilicsan oo waxaan ku darnaa galka bilawga PATH.
Hadda waxaan ku rakibnay muusigga caalamiga ah adoo soo dejinaya, hubinaya isla markaana fulinaya qoraalka rakibaadda, ka dibna sidoo kale ku qoraya curiyaha.phar galka isticmaalaha isla markaana abuuraya isku xirnaansho mar labaad:
Waxaan u adeegsanaa nvm si aan u rakibno Node.js. Kani waa qoraal bash ah oo dhab ahaantii u adeega in si fudud loogu beddelo noocyada node. Waxaan u isticmaalnaa guriga halkan Node.js lagu rakibay iyada oo aan lahayn xuquuq asaasi ah:
Sixid yar oo ka dhacday .bashrc ayaa ii ahayd daruuri:
Hadda waxaan rakibi karnaa oo aan dhaqaajin karnaa nooca hadda deggan ee Node.js:
Caawinta nvm waxaan sidoo kale si fudud ugu beddeli karnaa noocyada.
Waxaan awooday inaan ku fuliyo dhamaan talaabooyinkan qaar ka mid ah Jarmal wadaaga bixiyeyaasha martigelinta dhib la'aan. Qaar ka mid ah martigaliyayaasha waxay dhibaato ku qabaan iskuxirka, laakiin aliase sidoo kale wuu caawin karaa. Tusaale ahaan, soo socda .bashrc waxay ka caawisaa DomainFactory:
Waxa kale oo jira dhibaatooyin marka marin u helka / proc / stat ee goobaha la wadaago / la wadaago, taas oo ah sababta shaqada qanjirka os.cpus (), tusaale ahaan, u soo laabto aan la qeexin halkii tirada saxda ah ee diirkja . Markii la rakibayo xirmooyinka npm tani waxay horseedaa fariimo qalad ah sida "Lama aqrin karo 'dhererka hantida' ee qeexitaan la'aanta". Waan awooday inaan xaliyo dhibaatada adoo adeegsanaya nooc dhowaan ah Node.js (tusaale 11.15.0) oo wax ka qabtay dhibaatada.